सहिद गोविन्द गौतमका वुवाको यो दुखेसो
२११५ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ जेष्ठ २९ , १५:२२ बजे
महेन्द्रनगर । नेपाल–भारतबीच पुनर्वासको विवादित सीमा सर्भेको काम छाडेर नेपाली सर्भे टोली रातारात काठमाडौं फर्किएपछि पुनर्वासका स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।
सीमा विवादमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट गोविन्द गौतम सहिद बनेपछि सरकारले सीमा सर्भेका लागि टोली खटाएको थियो । तर, टोली शुक्रबार राति एकाएक काठमाडौं फर्किएको हो । सहिद गोविन्द गौतमका ७१ वर्षीय बुबा खेमलाल भन्छन्, ‘सीमा विवादकै कारण गोविन्दले सहादत ग र्‍यो । सीमाकै लागि घटना भयो । र, सीमा सर्भे टोली त्यसै फर्किएको छ ।’
सर्भे टोलीले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय भेला राखेर काम सम्पन्न गरेर जाने भनेपछि एक्कासी फर्किएपछि आशंका उत्पन्न भएको पुनर्वासका पूर्ण पौडेलले बताए । ‘काम बाँकी नै छ भनेको टोली शुक्रबार राति १२ बजे फिर्ता भयो । तर, के कारणले गयो ? हामीलाई थाहा छैन ।’ सहिद गोविन्द गौतम सीमा संंघर्ष समितिका सहसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले पनि सर्भे टोली फिर्ता गएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । फागुन २६ गते भएको पुनर्वास घटनापछि आएको टोली काम सम्पन्न नै नगरी फर्किनुमा रहस्य लुकेको हुन सक्ने उनको दावी छ ।
नेपाली भूमि जोगाउन पुनर्वासवासीले ठूलो त्याग, बलिदान एवम् साथ दिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले भारतीय सर्भे टोलीले नेपाली टोलीले देखाएको वास्तविक पिलरमा सहमति नजनाएपछि टोली दबाबमा परेर फिर्ता भएको बताए । टोली फिर्ता हुनुभन्दा केही दिन अगाडि सीमा संघर्ष समितिलाई सोही टोलीका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार साविकको १९८ र १९९ नम्बर पिलर वैधानिक नभइ ‘रिफरेन्स पिलर’ रहेको भनी नेपाली टोलीले प्रमाणित गरिसकेको थियो । ‘सो पिलरदेखि कम्तीमा २ सय मिटर दक्षिणमा नेपाली भूमि पर्छ,’ टोलीका सदस्यले भनेको कुरा उदृत गर्दै अधिकारीले भने । सो विषयमा नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गरेपनि भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताएको थियो ।
सर्भे टोली फिर्ता भएपछि एमाले र जनमोर्चा कञ्चनपुरले समेत आपत्ति जनाएका छन् । टोली फिर्ता भएपछि पुनर्वास पुगेका एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष तारालामा तामाङ र जनमोर्चाका अध्यक्ष लोकेन्द्र लम्सालले टोली रातरात फिर्ता हुनु गम्भीर कुरा भएको बताए । एमाले अध्यक्ष तामाङले नेपाल–भारत सीमामा निर्माण हुन लागेको ह्यूमपाइपको विषयमा उत्पन्न सीमा विवादका कारण फागुनमा भएको पुनर्वास घटनापछि सर्भे गरिरहेको नेपाल–भारत संयुक्त टोलीमा सहभागी टोली रातारात हिँडेपछि यथार्थ कुरा बाहिर नआएको बताए । प्राप्त अपुष्ट जानकारी अनुसार पिलर गाड्ने सवालमा भारतले आफूले चाहेको ठाउँमा नेपालको सीमाभित्रै गाड्न खोज्दा र नेपालले नक्साको आधारमा काम गर्न खोज्दा अलिकति असमन्जस्यता भएको कुरा सुनेको उनले बताए । ‘स्पष्ट सीमा नक्साङ्कनमा नेपाली टोलीले भनेको कुरा भारतीय पक्षले नमानेपछि सरकारले टोलीलाई फिर्ता बोलाएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा कञ्चनपुरका अध्यक्ष लम्सालले संयुक्त टोली सर्भेका लागि आएपछि पुनर्वासका जनतामा पलाएको आशा निराशामा बदलिएको बताए । ‘यहाँको प्रशासन किन मुखदर्शक बनिरहेको छ, त्यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने । नेपाली टोलीका प्रमुख निर्मल आचार्यले ‘बर्खा लागेकाले माथिबाट फिर्ता आउन आदेश आएको’ बताएका थिए । आनन्दबजार छेउछाउको करिव साढे ४ किलोमिटर सीमा सर्भे गरी सीमास्तम्भ खडा गर्ने जिम्मेवारी लिएर आएको नापी विभागको टोली शुक्रबार राति अचानक भागेपछि मामिला रहस्यमय बन्दै गइरहेको छ ।
आनन्दबजारको घटनापछि सीमा समस्या सुल्झाउन नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले विगत २ महिनादेखि संयुक्तरुपमा काम गरिरहेको थियो । काम गरिरहेको उक्त टोलीसँग पटक–पटक जानकारी लिन खोज्दा प्राविधिक कारणले केही भन्न नसकिने बताउँदै आएको थियो । गत चैत महिनामा पुनर्वास पुगेको सर्भे टोलीले सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय बुद्धिजीवि, समाजसेवी लगायतसँगको छलफलमा काम सकेर मात्र जाने बताएको थियो ।
रातारात भारतले १९९ नम्बर पिल्लर मेटायो !
मध्यरातमा सीमा सर्भे टोलीले पुनर्वास छाड्दा र त्यसपछि के भयो ?
धन्य देउवा सरकार : पुनर्वासबाट नेपाली सर्भे टोली रातारात टाप !